Fandroana anaty trano, fironana amin'ny fandroana | Bezzia
Maria vazquez | | Fironana haingo
Ny efitrano fandroana an-tongotra dia safidy hafa isafidianana olona isan'andro ao an-trano fidiany. Tsy kisendrasendra izany, fa avy ny orana anatiny iray amin'ireo safidy mampahazo aina indrindra ary nanolotra fisaorana noho ny tsy fisian'ny sakana hiditra amin'izany.
ny orana mandro avelany hamorona fitohizan'ny fandroana izay tsy azo tanterahina amin'ny fomba hafa. Endri-javatra manintona iray, tsy isalasalana, na amin'ny hatsarana sy amin'ny asany rehefa manamora ny fidirana amin'ny fandroana sy misoroka loza.
1 Ny toetra mampiavaka ny fandroana anatiny
2 Tombony sy fatiantoka ny orana mandro an-tongotra
Ny toetra mampiavaka ny fandroana anatiny
Inona no atao hoe mandro an-tongotra? Miantso ny fandroana misokatra amin'ny ranonorana mivatravatra an-toerana izahay. Fandroana fitsangantsanganana an-tongotra misy lehibe fahaiza-manao sy hafainganam-pandeha hisorohana ny rano tsy hangonina ary bakteria sy holatra tsy hiparitaka.
Nihatsara be ny teknikan'ny tatatra ankehitriny. Tsy ilaina intsony ny manana fonony eo afovoan'ny fandroana hamindrana ny rano, tsia. Misy hafa fomba vaovao ny fanaovana izany ary izany dia tsy hisorohana ny fanangonana rano fotsiny, fa hanome ny hatsarana madio kokoa amin'ny fandroana anao koa. Miresaka momba ny….
Ireo mpanangona miaraka amin'ny mombamomba azy. Ny rano dia esorina amin'ny alàlan'ny mpanangona kanto misy mombamomba vita amin'ny vy tsy misy fangarony. Amin'ny ankapobeny dia apetraka amin'ny lafiny iray izy io ary misy sivana anti-volo azo ampiharina izay azonao esorina, hosasana ary hadio mora foana.
Sitroka rindrina. Izy io dia mamela ny fandroana tsy misy sakana miaraka amina famolavolana lampivato mitohy. Amin'ny alàlan'ny famindrana ny tatatra amin'ny gorodona mankany amin'ny rindrina, dia manalavitra ny fanitsakitsahana grates na vy amin'ny efitrano fandroana isika.
Noho ny toetran'ireto ranonorana ireto, izay manaparitaka ny lovia fandroana amin'ny ankapobeny, ny faritra dia tsy maintsy tanterahina tsara aloha ary jereo tsara ny gorodona, avy eo, misafidy fitaovana tsy mitete ho an'ny paving. Ny tile dia iray amin'ireo fitaovana mahaliana indrindra hanaovana azy, na dia maro aza ny hafa izay noho ny fitsaboana anti-slip dia nanjary safidy tsara.
Tombony sy fatiantoka ny orana mandro an-tongotra
Amin'ity fotoana ity dia efa nanonona ankolaka ny sasany amin'ireo tombony azo avy amin'ny fandroana mandehandeha an-tongotra isika, na dia mieritreritra aza ianao ny amin'ny mety hametrahana ny iray ao amin'ny trano fidianao dia azonay antoka fa ilaina ny mahafantatra azy rehetra.
Mahafinaritra azy ireo ny miditra sy mivoaka amin'izy ireo. Tsy misy sakana amin'ny fidirana ao aminy, endri-javatra mahaliana indrindra ho an'ny olona antitra na amin'ny olan'ny fivezivezena.
Amin'ny fampisehoana endrika mitohy tena mora diovina izy ireo.
Tsotra ny mametraka azy ireo. Ny fandroana asa dia azo apetraka eo an-toerana na amin'ny fanamboarana ampahany natao tao an-trano.
Avelao ny fampiasana habaka tsara kokoa. Amin'ny alàlan'ny fandefasana ireo sakana ara-batana dia azo hamarinina ny toerana.
Hanitatra ny fandroana amin'ny fahitana. Ny gorodona mitohy ao amin'ny trano fidiovana dia mamitaka ny maso, mahatonga antsika hahatakatra ny habaka lehibe kokoa.
Amin'izao fotoana izao dia hieritreritra ianao fa tombony avokoa izy ireo. Ary eny, izy ireo dia saika tombony rehetra, saingy mandainga izahay rehefa milaza fa ny orana mandehandeha dia tsy manome fatiantoka. Ary azonay antoka fa efa nieritreritra momba azy ireo ianao.
Fandroana tsy dia vita Hahatonga ny rano hiangona izany ary hitombo ny holatra sy ny bakteria, noho izany ilaina ny fananana olona matihanina amin'ny fametrahana azy.
Eo amin'ny haavo ambany dia hisitaka ny rano, noho izany dia ilaina izany fametrahana efijery na fanorotoroana asa mba hiarovana fanaka eo akaiky eo.
Ny orana mandehandeha dia manome hatsaran-tarehy madio sy maoderina ho an'ny trano fidiovana fa azo apetraka amin'ny karazana trano fidiovana rehetra. Ny safidin'ny palitao Ho fanalahidy ho an'ny fandroana mandehandeha an-tongotra izy io, tsy hoe tokony hiasa fotsiny fa hanaraka ny fomban'ny tranonao koa.
Ankehitriny rehefa fantatrao ny toetran'ny orana mandehandeha an-tongotra, ny tombony sy ny mampiavaka azy, afaka miloka amin'ny iray amin'ireo karazan'akanjo ireo ve ianao hiakanjo ny trano fidianao? Mino izahay ao Bezzia fa safidy tsara hafa izy ireo hisorohana ny sakana ara-batana ary hanamora ny fiainana ho antsika satria mihantitra daholo isika rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Fironana haingo » Orana mando ao anatiny, fironana amin'ny fandroana
Rush ny fivarotana fahavaratra Designers Society